छोरी डीएसपी भइन् , गर्वका साथ इन्स्पेक्टर बुबाले सलाम गरे ! – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /रोचक/छोरी डीएसपी भइन् , गर्वका साथ इन्स्पेक्टर बुबाले सलाम गरे !
काठमाडौं । कुनै पनि विजय र उपलब्धि अझै खास हुन्छ यदि उक्त सफलता तपाईंमा आमा-बुबा गर्व महसुस गर्छन्। त्यस्तै एउटा विशेष घटनाको तस्विर अहिले सामाजिक संजालमा खुब भाइरल भइरहेको छ जसमा एक बाबुले आफ्नी छोरीलाई गर्वकाका साथ सलाम गरिरहेका छन् जो आन्ध्र प्रदेशको पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) हुन्। एक ट्वीटमा आंध्र प्रदेश पुलिसले ‘दुर्लभ र हृदयस्पर्शी घटनालाई’ एपी पुलिसको पहिलो ड्युटी मिटिंगले परिवारलाई सँगै ल्यायो! भन्दै एक तस्विर साझा गरेको छ।
रिपोर्टका अनुसार प्रशान्ती राज्यको विभाजन पछि आन्ध्र प्रदेशलाई प्रशिक्षण दिने र आन्ध्र प्रदेश पब्लिक कमिशन समूह १ लाई क्र्याक गर्ने डीएसपीहरूको पहिलो समूहकी हुन्। उनी हाल गुन्टुर अर्बन साउथ डीएसपी हुन्। न्युज मिनेटले उनलाई उद्धृत गर्दै भन्यो कि उनको बुबाले उनलाई सलाम गरिरहेको देखेर उनी धेरै सहज थिइनन्। “ हामीले एक-अर्कालाई ड्युटीमा भेटेको यो पहिलो पटक हो। उहाँले मलाई अभिवादन गर्दा मैले सहज महसुस गरिन, जे भएपनि उहाँ मेरो बुबा हो। मैले उहाँलाई अभिवादन नगर्न भनेँ तर उहाँले गर्नुभयो। मैले पनि सलाम फर्काएँ”, उनले भनिन्।
“मेरो बुबा मेरो प्रमुख प्रेरणा हुनुहुन्छ। उहाँले अथक प्रयास गर्दै जनताको सेवा गरेको हेर्दै मैले बढेको हुँ। उहाँले धेरै मानिसहरूलाई आफूले सकेजति सहायता गर्नुभएको छ। यहि कारणले गर्दा मैले यो विभाग छनौट गरें। “म विभागप्रति धेरै सकारात्मक दृष्टिकोण राख्छु,” प्रशान्ती भन्छिन्।